Uptodate MM - Page 100 of 141 - Media and Entertainment
အခါသင်္ကြန် ပြည်တော်ပြန် မြန်မာနိုင်သား (၁၁) ဦး အေ၇းပေါ်ဆေးရုံတင်ရ
အခါသင်္ကြန် ပြည်တော်ပြန် မြန်မာနိုင်သား (၁၁) ဦး ကားတွင်း သတိမေ့ မြောသွားသဖြင့် အေ၇းပေါ်ဆေးရုံတင်ရ ဧပြီ(၃) ရက်နေ့ က ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆူရဌာနီကနေ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ ကို ဗင်ကားနဲ့ စီးလုံးဌားဆင်းလာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား […]
အရွယ်နဲ့မမျှသောအသိကလေးဒေါ်လာ $ 5000.ဆုရ သူရဲကောင်းလေး မာအင်း။
အရွယ်နဲ့မမျှသောအသိကလေး ဒေါ်လာ $ 5000.ဆုရ သူရဲကောင်းလေး မာအင်း။ 31.3.2019. ညဉ့်ဒါကာမြို့ရှိ.. မိုးပျံတိုက်ကြီး မီးလောင်နေစဉ် လူများမှာ ဖုန်းကိုယ်စီဖြင့် ဗွီဒီယို၊ဓာတ်ပုံရိုက်ကာအလုပ်များနေကြသော်လည်း ပေါက်ပြဲနေသော မီးသတ်ပိုက်၏ ယိုပေါက်ကိုလက်လှမ်းမှီရာ ပလက်စတစ်စများကိုကောက်ကာသူ့ဒူးလေးဖြင်ဖိထားကာကြိုးစား၍မိမိအသိတရားဖြင့်ပိတ်ထားနေသည့် ဆင်းရဲသော ကလေးငယ် မာအင်း၏ဓာတ်ပုံတပုံမှာ […]
အွန်လိုင်းမှာ မအူမလည် မမြင်ဖူးပဲ ချစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ သတိထားနိုင်ဖို့
အွန်လိုင်းမှာ မအူမလည် မမြင်ဖူးပဲ ချစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ သတိထားနိုင်ဖို့ မအူမလည် မိန်းကလေးများ အထူးသတိထား … အွန်လိုင်းပေါ်က အချစ်ကိုယုံစားပြီး လိုက်လာတဲ့ (၁၄)နှစ် သမီးလေး မော်လမြိုင်မှာ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေလို့ ကူညီပေးခဲ့ရပြီး ကောင်မလေးက အသက်(၁၄)နှစ်။ […]
ကမ္ဘာ့ရေခဲပြင်စကိတ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူး မြန်မာရွှေရတဲ့ စကိတ်ကစားနည်းမှာ ရေခဲပြင်စကိတ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေချည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရ တာဖြစ်ပြီး ဘရာဇီး၊အာဂျင်တီးနားတို့ကို ကျော်ဖြတ်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ ရေခဲပြင် စကိတ်ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံက အားကစားသမား […]
တရားထိုင်ခြင်းအလေ့အထဟာ ယခုအချိန်မှာ လူသိများထင်ရှားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချမ်းသာသူ ဘီလျံနာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့ကလည်း တရားရှုမှတ်ခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လူဦးရေရဲ့ (၈)ရာခိုင်နှုန်း၊ (၁၈)သန်းဟာ တရားထိုင်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားတိုးစေခြင်းနဲ့ […]
4.4.2019 မှ 10.4.2019 အထိတစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီးမိမိ အတွက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလဲ မိမိရဲ့ဆရာသမားမိဘတွေဆီကရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖခင်က မိမိဖြစ်ချင်တာ တွေကိုလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာလစာနည်းနေတာဖြစ်စေ၊ အခွင့်အရေးမရတာမျိုးဖြစ်စေ၊ လုပ်ရတာ နဲ့မတန်ဘူးထင်နေတယ်ဆိုရင် အထက်လူကြီးဆီတင်ပြပြောဆိုလို့အလွန်ပဲကောင်းပါတယ်။ […]
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “ လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ် […]
မန္တ​လေးသားစစ်​စစ်​​တွေ​တောင်​မှမသိကြတဲ့ တပြဆိုတာ
မန္တ​လေးသားစစ်​စစ်​​တွေ​တောင်​မှမသိကြတဲ့ တပြဆိုတာ “မန္တလေး တစ်ပြ” မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေက မြေပြင်ပေါ်က ခရီးအကွာအဝေးကို ပြောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းညွှန်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်၁ ပြ၊ ၂ ပြ၊ ၃ ပြ…. စသဖြင့် ပြောတတ်ကြတယ်။ မန္တလေးနဲ့ […]
မြင်းခြံတွင် မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး သတိုးသမီးလောင်း ပျောက်ဆုံး
သမီး​မေနှင်းသွယ်​​မေ​မေနှင့်​​ဖေ​ဖေစိတ်​ပူ​နေတယ်​​ရောက်​ရာအရပ်​ကအမြန်​ပြန်​လာပါ ၀၉၄၀၂၅၄၅၅၂၄ ၀၉၄၀၂၅၆၉၂၀၁ ၀၉၇၉၈၃၃၀၆၈၉ သူငယ်​ချင်းများအားလုံးရှယ်​​ပေးခြင်းဖြင့်​ကူညီ​ပေးပါ အားလုံးကို​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ် MIn MIn Facebook(group by မြင်းခြံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ) Unicode သမီး​မနှေငျးသှယျ​​မေ​မနှေငျ့​​ဖေ​ဖစေိတျ​ပူ​နတေယျ​​ရောကျ​ရာအရပျ​ကအမွနျ​ပွနျ​လာပါ ၀၉၄၀၂၅၄၅၅၂၄ ၀၉၄၀၂၅၆၉၂၀၁ ၀၉၇၉၈၃၃၀၆၈၉ သူငယျ​ခငျြးမြားအားလုံးရှယျ​​ပေးခွငျးဖွငျ့​ကူညီ​ပေးပါ အားလုံးကို​ကြေးဇူးတငျ​ပါတယျ MIn MIn […]
၄လပိုင်း၅ရက်​နေ့မှာ ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုဖြစ်အောင် ပြုလိုက်ပါ
၄လပိုင်း၅ရက်​နေ့မှာ ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုဖြစ်အောင် ပြုလိုက်ပါ လဆန်း၁ရက်​​နေ့မှာ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုပါ ယခု​ဖော်​ပြပါ ၄လပိုင်း၅ရက်​နေ့ဟာမြန်​မာအ​ခေါ်အ​ဝေါ်အရ တန်​ခူးလဆန်း၁ရက်​​နေ့ဖြစ်​ပါတယ်​ ​ရှေး​ရှေး​သောပညာရှိကြီး​တွေ က ဒီလို ဆန်းရက်​၁ရက်​​နေ့ကြုံရင်​ဦး​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြု တတ်​ကြပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ဒီလိုရက်​ကိုမဖြစ်​မ​နေဦး​ခေါင်​​ဆေးမယ်​ဆိုရင်​​တော့ တ​ရော်​ကင်းပွန်းရာ်​ မြန်​မာနည်းမြန်​မာဟန်​နဲ့ဦး​ခေါင်း​ဆေးရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ ဦး​ခေါင်း​ဆေး​တော့မယ်​ဆိုရင်​ တ​ရော်​ကင်းပွန်းရည်​ထဲကိုသ​ပြေ ၉ညွန့်​ထည့်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ တနင်္ဂ​နွေသားသမီး​တွေက​မြောက်​အရပ်​ မျက်​နှာမူပါ […]